Ny fiaramanidina Sonair any Angola dia mijanona amin'ny sidina Boeing 737-700s
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ny fiaramanidina Sonair any Angola dia mijanona amin'ny sidina Boeing 737-700s
Angola ny SonAir Airline Services, SA, fantatra amin'ny anarana hoe SonAir, dia nijanona tsy nitondra sidina ara-barotra an-trano niaraka tamin'ny Boeing 737-700, izay nanome ny fifandraisan'ny rivotra eo anelanelan'ny Luanda sy ny tanànan'ny Cabinda, Catumbela (Benguela) ary Lubango (Huila).
Nilaza tamin'ny masoivohom-baovao Angop ny loharanom-pahalalana fa ny mifanohitra amin'ny fanapahan-kevitra voalohany hanafoanana ireo fiaramanidina fiaramanidina telo (Beechcraft, Boeing ary Havilland Canada DHC-6 Twin Otter, ampiasaina), ny fiaramanidina Beechcraft dia tazonina noho ny fanoloran-tena natao tamin'ny 'Operation Fangaraharana 'sy amin'ireo orinasan-tsolika.
Toy izany koa, hoy izy, ireto fiaramanidina ireto ihany dia tokony hanohy hanolotra fitsangatsanganana any Cabinda, miaraka amin'ny fifandraisana enina, mandra-pahatongan'ny fanapahan-kevitra politika hafa, satria tsy afaka mamaly ny fangatahana amin'ity sidina Angoley TAAG ity.
Ny dingana fanakatonana an'i Sonair dia mbola tsy vita, ary tokony hanaja ny fifanarahana nifanaovany tamin'ireo orinasa mpitrandraka solika izy ireo.
SonAir, amin'ny fiaramanidina elatra voafetra, dia manana Boeings 2 sy Beechcraft 1900D efatra mihetsika, ary koa fiaramanidina fahafito ho an'ny tahiry, saingy fiaramanidina roa ihany no niasa, izay tokony handray ny sidina farany nataony ny sabotsy.
Nanambara ny drafitra famerenana amin'ny laoniny ny vohitra Hawaii Hawaii
Iza ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka izay mandà ny fitakiana onitra indrindra?
36 minitra lasa izay